ओली हेडसरलाई खुल्लापत्र | Suvadin !
के तपाई अब सच्चिनु हुन्छ? आफनो पार्टी नेता कार्यकर्ता र समग्र देश सच्याउन तयार हुनुहुन्छ? अस्पताल खोल्नु, मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु, कुनै कपडा पसल खोल्नु, साबुन फ्याक्ट्री खोल्नु, माटाको भाँडा पसल चलाउनु जस्तो हो? मापदण्ड त चर्पी बनाउन, किचेन बनाउन, अनि फूल रोप्ने खाडल खन्न अनि मन्दिर बनाउन पनि नियम एेन कानून चाहिन्छ, कानूनको पालना गर्नुपर्छ। तर, तपार्इको पार्टी समर्थक अनि अरु द्रव्य पिशाचहरुको लागि स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापारको लागि किन केही चाहिन्न जुनसुकै मापदण्ड र विधिविधान किन मिचिन्छ?
Jan 21, 2018 18:14
लेखक सञ्जीव कार्की र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अाेली।
Shared: 232 times | Share this on
वेटिङ प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीज्यू,
प्रथमत्ः यहाँको गठबन्धनले नेपाली जनताको अपार समर्थन पाएर विजयी प्राप्त गर्यो। जसका शुत्राधार र अग्रणी व्यक्तित्व तपाई अनि तपाईको पार्टी नेकपा एमालेलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना। नेपाली जनता राजनीतिक स्थिरता सुशासन र विकासको पक्षमा छन् भन्ने कुरा यो निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतले पुष्टि गरिसेकको छ। जनता कसैका निजी सम्पति होइनन्। जनता आफूले इच्छाएका, रुचाएका व्यक्ति र पार्टीलाई राज्य हाक्ने अभिभारा दिन सधैं स्वतन्त्र छन्। जसको हेक्का सबैले राख्नु जरुरी छ। नसकेमा आज कांग्रेसको जस्तो हाल भोलि अरुको नहोला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
तसर्थ पाइला चाल्दा संयम् र विवेकी भएर चाल्नुहोला। विजयको उल्लास, अभियान र वेग, आवेग, आक्रोश बदला र प्रतिशोध नबनोस्, नदेखियोस्। तपाईले चाल्ने हरेक कदममा तपाईलाई भोट दिने, नदिने तपाईको पार्टी मन पराउने, नपराउने सबैले अपनत्व र गर्व गर्न सकुन् सारा देशबासीको अपेक्षा यही हो। सधैं अस्थिर र आलोपालो जस्तो सरकार बन्ने र गिर्ने ढल्ने र उठ्ने परिपाटीबाट जनता दिक्कवाक्क भएर तपाईको नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई जनताले स्थाई सरकार दीगो र भरिलो सरकारको लागि मतदान गरेका हुन्। तर, आलोपालो भन्ने राजनीतिको धुमिल आवाजले जनताका कान चनाखाे बन्दैछन्। मैले सामान्य ध्यानाकर्षण गराएको मात्रै हुँ।
आदरणीय ओली सर,
म तपाइलाई जति आलोचना गर्छु, तपाईको भनाईप्रति जति विमति राख्छु। त्यति नै तपाईप्रति आदर छ, सम्मान छ, म आलोचना गर्न स्वतन्त्र छु। तर, निन्दा मेरो अभिष्ट होइन। र, सायद कसैको पनि निन्दा गर्नु नपरोस्। तपाईको वाकपटुता र मासमा आफूले चाहेको कुरा कम्युनिकेट गर्ने जुन कला छ, सम्प्रेषण गर्ने क्षमता प्रति त झन् मिठो इर्श्या गर्छु र कम्तिमा तपार्इको जति सम्प्रेषण क्षमता सबै नेतामा होस् भन्ने कामना गर्छु। ओली सर, तपार्इले राष्ट्रियताको सवालमा लिनु भएको अडान तत्कालिन परिस्थितिमा सबैले प्रशंसा र तारिफ गरेको विषय हो। सोही कारण तपार्इको विगतका केही खत र बिराम जनताले विस्मृतिमा राखेर तपार्इलाई अभिनन्दन गरे चुनावी अभियानमार्फत जुन संयोग अति विरलै नेतालाई मात्र जुरेको कुरा हो। यसको गरिमा महत्ता र ओजलाई सामान्य नसम्झनु होला।
म आज समग्र देशको कुरा र समस्याको बारेमा त बोल्दिन, भन्दिन सबै लेख्ने समय पनि हुन्न। तर, देशको जल्दोबल्दो समस्या र देशको ध्यान एकै आवाजले तरंगित बनाउने डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका सवाल र ठड्याउने औँलाबारे केही कुरा राख्न अनुमति माग्छु। डाक्टर केसीले कसलाई किन, कसरी र कहिले कहाँ औँला तेर्स्याए? किन र कहिले त्यतातिर नजाऊ जुन बहस र छलफल पद्दति नियम र विधि विधानको विषय र प्रसंग होला। कुनै पनि अभियन्ता संविधान कानून र विधिविधानको साइत हेरेर जन्मदैनन्। उनले विमति जनाएको अपनाएको शैली विधि र प्रक्रियाका बारेमा थुप्रै असहमति राख्न सकिन्छ।
तर, जुन विषय र समस्याको चुरो देखाए सायद यसमा तपार्इको पनि विमति छैन र उनको सत्याग्रहमा तपाई सरकार प्रमुख हुँदा गरिएको सम्झौता यसको बलियो प्रमाण हो, उदाहरण हो। तपाईका पार्टीका थुप्रै नेता कार्यकर्ताले गोविन्द केसी प्रकरणमा बोलेका र धारणा बनाएका कुरा र प्रमाण खोज्न गाह्रो छैन। एमालेको एउटा पंक्ति सधैँ सकारात्मक र ग्रहणशील देखिन्छ भने एउटा खेमा अत्यन्त निकृष्ट ढंगले केसीमाथि खनिन्छ। डाक्टर केसीले शिक्षा र स्वास्थ, विशेष गरी चिकित्सा क्षेत्रमा जुन विकृति र विसंगति देखाए, के त्यो कुनै स्वार्थको पक्षमा र देशको अहितमा छ? छैन भने एउटा राष्ट्रको ठूलो नेताले जनताको पक्षमा पृष्ठ पोषण गर्ने कि? निहीत व्यापारी स्वार्थ समूहको पक्षमा?
जिन्दगीको लय संगतिपूर्ण नैतिकतासहितको हुनुपर्छ होइन र? चुरोट खानेले हत्तनपत्त चुरोट पछिल्तिर लुकाएर दिएको उपदेशभन्दा चुरोट नखानेले चुरोटको खराबीमा बोलेको लेखेको धेरै प्रभावकारी हुन्छ होइन र? डाक्टर केसीले जे समस्या देखाएका छन्, समस्याको जुन मेसो झिकिदिएका छन्। त्यो यो राज्यको अहितको लागि कहाँ छ? एउटा सत्य र तितो पक्ष के हो भने यसले केही मान्छेको सपना र द्रव्यको संसारमा भने घाटा पुग्छ नै? तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यका खातिर केही स्वार्थी समूहको व्यापार व्यवसाय महत्वपूर्ण हुनसक्दैन हजुर? शिक्षा र स्वास्थ्य अति संवेदनशील र जनताको नैसर्गिक अधिकार हो जसलाई व्यापार व्यवसाय र उधोगधन्दाको रुपमा राज्यले जहिले र जसरी जसको पालामा भएपनि मान्यता दियो।
र, व्यापार प्रयोजनका निमित्त उपयोग गरियो यो नितान्त गलत र अशोभनीय हर्कत हो। स्वस्थ्य र शिक्षाको निजीकरण जसले गर्यो र ज–जसले निरन्तरता दिए त्यो गलत थियो भयो अब गरिन्न गलत बरु सच्याएर जाने हो भनेर राज्यले गरेको त्रुटी करेक्सन तपार्इको नेतृत्वको वाम सरकारले गरेको हेर्ने अभिलाशा जनताले पालेका छन्। के तपाई अब सच्चिनु हुन्छ? आफनो पार्टी नेता कार्यकर्ता र समग्र देश सच्याउन तयार हुनुहुन्छ? अस्पताल खोल्नु, मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु, कुनै कपडा पसल खोल्नु, साबुन फ्याक्ट्री खोल्नु, माटाको भाँडा पसल चलाउनु जस्तो हो? मापदण्ड त चर्पी बनाउन, किचेन बनाउन, अनि फूल रोप्ने खाडल खन्न अनि मन्दिर बनाउन पनि नियम एेन कानून चाहिन्छ, कानूनको पालना गर्नुपर्छ।
तर, तपार्इको पार्टी समर्थक अनि अरु द्रव्य पिशाचहरुको लागि स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापारको लागि किन केही चाहिन्न जुनसुकै मापदण्ड र विधिविधान किन मिचिन्छ? सामान्य स्वास्थ्य चौकीको लागि त सो अनुसारको उपकरण, दक्ष जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ भने त्यति पनि केही आधार र पूर्वाधार नभएको घट्टेकुलोमा अवस्थित नेशनल कलेज जस्ता अस्पताल र मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने कुन नियम या नियत को बाध्यता हो ओली महोदय?
कुन नैतिकताले भन्छ जनताको स्वास्थ्यभन्दा नेताको स्वार्थ ठुलो भनेर ? तपाई नेताहरु विदेशको महँगो र सुविधासम्पन अस्पतालमा उपचार गर्ने अनि जनतालाई भने जस्तो डाक्टर र जस्तो अस्पतालमा भएपनि उपचार गर्नुपर्ने या उपचार नै नगरी मरे पनि हुने यो कुन सिद्धान्त र वादको जीवन दर्शन हो सर? मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादमा पक्कै यो छैन। त्यहाँ त कल्याणकारी राज्यको अवधारणा र समतामूलक राज्यको परिकल्पना हुनुपर्छ। तपाईहरुले किन जनताको स्वार्थभन्दा आफ्नो र केही लोभीपापी व्यापारीको लागि प्रणालीमा धावा बोल्नु भयो? प्रणाली कब्जा गर्नु भयो? जनताको स्वास्थ्य र शिक्षालाई किन व्यापारी र माफियाको हितानुकुल बनाउनु भयो? तपाईहरुले राजनीतिका माध्यमबाट व्यापारीहरु भर्ना गरेर, प्रणाली कब्जा गरेर देश लुट्दै र लुटाउँदै हुनुहुन्छ।
नीतिनिर्माण तहमा व्यापारी गुण्डा तस्करलाई समानुपातिकको बाटोबाट कतिपय अवस्था र खण्डमा प्रत्यक्ष माध्यमबाट द्रव्यको बलमा चुनाव जिताएर लैजाने अनि नीतिनिर्माणको थलोमा उनीहरुको हालीमुहाली गराई दिनुहुन्छ। जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाको नीति बनाउने ठाउँमा निजि कलेज, अस्पतालका साहु, महाजन र व्यापार व्यवसाय गर्ने त्यसका र सञ्चालक पुर्याएपछि कसको हितमा नीति नियम कानून बन्छ सर? नीति निर्माणको थलो लालची, देश लुटुवा, द्रव्यमानवहरुको पञ्जामा परेपछि त्यहाँबाट बनेर आएको नियम कानून विधान र परिधान देश र जनताको हितमा कसरी हुन्छ, बन्छ सर? त्यस्ता समूहको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर, प्रणालीलाई कब्जा गरेर, राज्य संयन्त्रमाथि स्वार्थको दाह्रा, नङ्ग्रा धसेर बनेर आएको नियम प्रणालीबाट नै आएको भएपनि त्यहाँ अविवेकीहरुको हस्तक्षेपले त्यो प्रणाली ध्वस्त भएको हुन्छ, जो देखावटी वैधानिकता प्राप्त भएपनि जनहितकारी हुनसक्दैन।
र, अहिले नभएको पनि त्यही हो। शैक्षिक गुणस्तर र सेवामा भएको कमसलता पनि यही हो। क्वान्टिटी दिने तर क्वालिटी नदिने किन भयो यो यही गलत नीतिको कारण भएको हो जसलाई अब तपार्इले सच्याउनुपर्छ, स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापार गर्न जसरी निजीकरण गरियो। र स्वार्थी व्यापारीको हातमा यसलाई थमाइयो यो जसले गरेको भए पनि गम्भीर र महाभूल हो थियो। यसको दलदलबाट देशले पाइला मोड्नु पर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको नैसर्गिक अधिकार भनेर संविधानमा लेखेपछि यसको प्राथमिकीकरण गरी लोककल्याणकारी अवधारणा अन्तर्गत यसलाई राखेर यसको निजीकरण रोकिनुपर्छ, बन्द गरिनुपर्छ, यसको शुरुवात पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गरेर दृढताका साथ लागू गर्नुस् ओली सर। प्राध्यापक डाक्टर केदारभक्त माथेमा कार्यदलले तयार पारेको चिकित्सा सुधार र सम्भावनाको प्रतिवेदनलाई बिनामोलाहिजा लागू गर्ने असल प्रयत्न गर्नुस्।
जब डाक्टर केसी सत्याग्रहको बलिबेदीमा आफूलाई समर्पित गर्छन्। अनि त्यसबेला तपाई र तपाईका कार्यकर्तामा एउटा दम्भ देखिन्छ यो डाक्टरको शेखी झार्न पनि हामी उनले उठाएका मुद्दा र सवालको उपेक्षा गरेर अघि बढ्छौं, याद राख्नुस् सर। डाक्टर केसीले उठाएका मुद्दा जनताका मुद्दा हुन जसको उपेक्षा भनेको जनताको मर्ममाथिको प्रहार हो, जनस्वास्थ्य माथिको नाङ्गो खेलवाड हो। जन स्वास्थ्य माथि खेलवाड गर्नेलाई जनताले तीव्र घृणा र रोष प्रकट गर्नेछन्। बरु डाक्टर केसीलाई साइजमा राख्न उनले भने सम्झे र देखाएकोभन्दा बढी प्रगतिशील काम गर्नुस्।
औँलो ठड्याउने बाटो नदिनुस् उनको आन्दोलनको उपादेयता समाप्त हुन्छ। डाक्टर केसीले न्यायालयमा न्यायाधीशहरुले गर्ने बदमासीविरुद्ध पनि जेहाद छोडे। थाहा छ, न्यायालयमा भर्तिकेन्द्र बनाउन जुन भागबण्डाको राजनीति गर्नुभयो जसको परिणाम कस्ता न्यायाधीश आए कस्तालाई धपाउनु भयो? जनताको अन्तिम आस्थाको केन्द्र किन आज यतिधेरै विवादित र अमर्यादित बन्यो? के अदालत न्यायको किनबेच गर्ने दोकान हो? यी र यस्तै गलत विगत अब फेरिनु पर्छ। निजी लोभमोहको घेरा र जालबाट माथि उठेर तपाई अब देशको गर्व गर्ने नेता बन्नुस्।
निजीकरणको मसिहा कांग्रेस हो, स्वास्थ्य र शिक्षामा यसले निजीकरण गर्यो भन्नुहुन्छ। तर, निजीकरण हामी गर्दैनौं कम्तिमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा निजीकरण हाम्रो पार्टी र हामीले गर्दैनौं भनेर आजसम्म कहिले भन्नसक्नु भयो, निजीकरण हाम्रो नीति होइन भनेर आफ्नो सरकारको पालामा त्यसका विरुद्द के गर्नु भयो कुनै तर्क र प्रमाण छ महोदय? बरु कांग्रेसले गर्न हुने हामीले किन नहुने भनेर अतर्क र अवान्छित अनैतिकता प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, भन्नुस् र गरेर देखाउनुस उसले गरेको गल्ती र हामीले दिएको निरन्तरता अब फिर्ता गर्छौं, स्वास्थ्य र शिक्षाको निजीकरण सम्पूर्णमा खारेज गर्छौं। कांगेसले अखाद्य पदार्थमा रुची देखायो भने तपाईहरुले पनि त्यस्तै गर्छौ भन्नु बेठिक हो। कांग्रेस पो बिग्रियो त तपाईहरुलाई सप्रिने र काम गरेर देखाउने अवसर छ देखाउनुहोस। स्वास्थ्य र शिक्षाको निजीकरण रोकी व्यापारिक जञ्जालबाट देशको असंगत अलयलाई लयमा फर्काउन किंचित बिलम्ब नगर्नुस्।
जनता पचास पैसाको सिटामोल, पाँच रुपैयाँ पुरियाको जीवनजल खान नपाए आजपनि अकालमा गाउँ–गाउँमा मरिरहेछन्, सय–पचासको भोटो, चोली लाउन नपाएर र एउटा डेढ सयको कम्बल ओढंन नपाएर शीतलहरले मारिरहेछन्, समयमा स्वास्थ्य चौकी पुग्न नसकेर दिनमा सयौं गर्भावती महिला मृत्युको प्यारो बनेका छन्। तर, तपाईका पार्टीका उच्च नेता र सांसदहरु ककफाइट र बुलफाइट हेर्न लाखौं रुपैयाँको हेलिकप्टर चढेर मनोरञ्जन लिन पुग्छन्।
जनताको एक ट्याब्लेट औषधि खाएर बाँच्ने अधिकारभन्दा कति मूल्यवान र उच्च छ है तपाईहरुको मनोरञ्जनको अधिकार? तै पनि तपाईहरु गोविन्द केसी र अरु मानवीय मन भएका मान्छेहरुले गरेको सहयोगलाई खिसिट्युरी गर्नुहुन्छ अनैतिकताको पराकाष्ठ नाग्नुहुन्छ। एक पटक चुनाव जित्नु भनेको, बहुमत पाउनु भनेको सधैं–सधैंलाई जीतको लालपुर्जा पाउनु होइन? मानवियता भुल्नु र पाखण्ड पाल्नु अनि अभिमान बोक्नु र प्रतिशोधको पहाड खडा गर्नु होइन सर। जनस्वास्थ्यको सवालमा आफ्नो टाउकोमा सुनको हेल्मेट पहिरेर जनताको टाउको बेलै सरी नसम्झनुहोस्।
आदरणीय ओली हेडसर,
सनक, लहड, आवेग र चुट्किलाले देश चल्दैन, विवेक, विधि र विधान अनि उच्च मानवीय नैतिकताले देश चलाउनुहोस्, हल्काफुल्का टिप्पणी, विपक्षी प्रति क्षुद्र र खुद्रा घोचपेच अब तपाईको पद र गरिमालाई सुहाउँदो हुन्न, सत्य सुहाउन्न। संघीयताको पहिलो र तल–तलसम्मको प्राक्टिस भएकाले अहिल्यै आजै र तुरुन्तै एउटा पद्दति र विधिले बाध्ने प्रयास गर्नुस्। अहिले गरेको सुकर्मको फल तपाइलाई मिल्नेछ। नेपाली जनताले सदैव जयजय कार गर्नेछन्, तपाईका अनुयायीलाई पनि मौका दिनेछन्। अवसरको सुखद संयोग मिल्नेछ दीर्घकालसम्म।
आजको असल शुरुवात भोलि र भावी सन्ततिले सधैं स्मरण गर्नेछन्, सबैले अनुशरण गर्नेछन्। मैले जनताको प्रतिनिधि आवाज बोलेको हुँ, अन्यथा मानुहुने छैन म पनि यो देशलाई माया गर्ने यो माटोको सुगन्ध मनपराउने एउटा नागरिक हुँ। म आफ्नो आवाज देशको सबभन्दा ठूलो पार्टीका ठूला नेता र देशको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीसम्म नेपालकाे अाफ्नै सामाजिक सञ्जाल शुभदिनमार्फत पठाएका हुँ।
तपाईको शुभचिन्तक सञ्जीव कार्की।